Tababare Jurgen Klopp Oo U Muuqday In Uu Iclaamiyay Bixitaanka Philippe Coutinho Kadib Barbarihii Liverpool Ka Soo Gaadhay Watfrod. – WWW.Gool24.net
Tababare Jurgen Klopp Oo U Muuqday In Uu Iclaamiyay Bixitaanka Philippe Coutinho Kadib Barbarihii Liverpool Ka Soo Gaadhay Watfrod.
Tababaraha kooxda Liverpool ee jurgen Klopp ayaa saxaafada ka soo hormuuqday kadib barbarihii 3-3 da ahaa ee ay kooxdiisa Reds la soo gaashay Watford, wuxuuna u muuqday mid iclaamiyay in uu aqbalay bixitaanka Philippe Coutinho uu ku doonayo in uu u wareego kooxda Barcelona. Klopp ayaa muddo dheer si adag uga soo hadlayay bixitaanka Coutinho ee xagaagan laakiin waxa uu ugu danbayn qirtay in uu aqbali karo go’aanka ciyaartoyga iyo mulkiilyaasha kooxdiisa.
Laakiin Jurgen Klopp ayaa sheegay in aanu arag warqada uu Coutinho ku dalbaday bixitaanka uu ku doonayo in uu Barcelona ugu biiro wuxuuna ku dooday in uu ku mashquul sanaa sidii uu kooxdiisa kulankan ugu diyaarin lahaa. Laakiin Klopp ayaa sheegay in aanu isku hawlin arinta Coutinho balse uu diirada saarayay kulanka ay kooxdiisu ciyaaraysay.
Jurgen Klopp oo u muuqda in uu aqbalay bixitaanka Coutinho ayaa yidhi: “Aniga waxaa waajib igu ah in aan aqbalo go’aanka mulkiilayaasha isla markaana mararka qaar go’aanka ciyaartoyda. Waqti xaadirkan anigu waxa kaliya ee aad diirada saarayo ayaa ah kooxda” ayuu Klopp ka sheegay shirkii jaraa’id ee ka danbeeyay kulankii Vicarage Road.
Klopp ayaa sheegay in aanu helin waqti uu kaga fikiro arinta Coutinho wuxuuna yidhi: “Anigu waqti aan kan kaga fikiro maan helin, sababtoo ah waxaa waajib igu ahayd in aan isku diyaariyo kulanka. Haddii ay tahay wax cadho leh, ciyaartoyga ayaan u sheegi lahaa, laakiin anigu maan helin warqada dalabka bixitaanka”.
Klopp oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Waxaa waajib idinku ah in aad kooxda waydiisaan. Maanta kooxda maan arag, waa in aad dadkaaw waydiisaan, laakiin anigu ma filaayo sababtoo aad ayay u cadahay waxa ay kooxda, FSG ka sheegeen”.
Liverpool ayaa wali ku adkaysanaysa in Coutinho aanu iib ahayn waxayna xidiga ree Brazil ku cadaadinaysaa in uu ixtiraamo heshiiska uu kooxda kula jiro, laakiin Barcelona ayaan haysan awood ay Coutinho kaga soo saarto Anfield maadaama oo aanu heshiiskiisa ku jirin qodob sheegaya lacagta lagu burburin karo waxayna ku qasban tahay in marka hore ay Liverpol dalabkeeda aqbasho.